Qindoominaan hojjechuu dhabuun misooma quucarsa
Babal’ina bu’uuraalee misoomaa guddina biyya tokkoo keessatti shoora guddaa taphata. Biyya keenyattis magaalaa hanga baadiyyaatti hojiin bu’uuraalee misoomaa babal’isuu xiyyeeffannaa addaatiin saffisaa jira.
Ta’us yeroo ammaa babal’ina bu’uuraalee misoomaa kunneeniin walqabatee hanqinoonni guddaan mul’ataa jiru. Daandii baasii guddaadhaan qaama tokkoon hojjetame osoo tajaajila gahaa hinkennin qaama biraatiin diigamuun gocha baratamaa ta’eera.
Biyya hiyyeetti babal’inni bu’uuraalee misooma sadarkaa daa’imaarra jiru keessatti isa qaamni tokko ijaaru qaamni tokko kan diiguu yoo ta’e ijaarsa bu’uuraalee misoomaa laamshessuun alatti qisaasama qabeenyaa guddaa dhaqqabsiisa.
Fagoo osoo hindeemiin Finfinnee keessatti daandii irra deddeebiin qotamee suphamu tajaajila hawaasummaarratti dhiibbaa uumaa jiru ilaalu qofti gahaadha. Akkuma 'Dhukkubsatanii wal’aanamuurraa dursanii of eeggachuu wayya' jedhamu san ijaaranii diiguun deebisanii suphuurraa dursanii wal hubatanii hojjechuun barbaachisaadha.
Tibbana dhimma kanarratti Ejensiin Qindeessa Bu’uuraalee Misoomaa Federaalaa qaamolee dhimmi ilaallatu waliin marii taasisee ture. Maricharratti dhimmootni babal’ina bu’uuraalee misoomaatti gufuu ta’an hedduun ka’aniiru. Eeggaataan daarektarri olaanaan ejensichaa, Obbo Solomoon Gabramadiin qindoominaan hojjechuu dhabuun babal’ina bu’uuraalee misoomaa quucarsaafi gufachiisaa jira.
Labsiin 857/2006 ba’e akka ibsutti dhaabbileen misoomaa mootummaa ijaarsa bu’uuraalee misoomaa gaggeessan kamuu ejensicharraa eeyyama fudhachuu qabu. Ejensichis dhaabbilee ulaagaa guutaniif eeyyama kenna.
Haaluma kanaan dhaabbileen misoomaa itti waamamnisaanii ejensichaaf ta’an Itiyoo-telekom, korporeeshinii daandii baaburaa, abbaa taayitaa daandiiwwanii, humnaafi tajaajila ibsaafi dhaabbata buufatoota xayyaara Itoophiyaati.
Dhaabbileen kunneen eeyyama ijaarsa bu’uuraalee misooma kan fudhatan ejensicharraati. Ejensichi eeyyama ijaarsa kennuu qofa osoo hintaane ijaarsa dhaabbileen kunneen taasisan ni to’ata ni hordofas.
Abbaa taayitaa daandiiwwaniirraa namootni yaada kaasan akka jedhanitti maastar pilaaniin dhibuunsaa ijaarsa daandiirratti gufuu guddaa ta’aa jira. Kunis wayita daandii hojjetan ujummoon bishaaniis ta’e sararri teelee qixa kamiin akka awwaalame wanti ibsu waan hinjirreef wayita ujummoon cabee akkasumas sararri telee cite dhaabbilee kunneen waliin waldhabbii uumamu danuudha.
Waldhabbii qofa osoo hintaane baasii dabalataan baasuun wayita suphan yookiin beenyaa kaffalanis ni jira. Caalaatti daandiiwwan biyyattii kanaan dura ijaaraman pilaanii ammayyaatiin waan hintaaneef rakkoon kun dabala deema.
Ejensicharraa haala kenniinsa eeyyama ijaarsa bu’uuraalee misoomaa ilaalchisee ibsa kan kennan Aadde Tsaggaa Fayyisaa akka jedhanitti, maastar pilaanii ilaalchisee komiin dhaabbilee misoomaa biraa ka’u sirrii ta’us hanga maastar pilaaniin qophaa’utti dhaabbatni bu’uuraalee misoomaa ijaaru kamuu abbootii gaheen waliigaltee qabaachuusaa ragaa dhiyeessuu qaba.
Bu’uuraaleen misoomaa ijaaraman kunneenis eegumsa naannawaarratti bifa dhiibbaa hinuumneen ta’uu qaba. Dabalataanis mashinootaafi humna namaa gahaa qabaachuun ulaagaalee eeyyama ijaarsaaf fudhachuuf gargaaran keessaa isaan tokko.
Walumaagalatti, guddina biyyi keenya eegalte gara caalutti ceesisuu keessatti babal’inni bu’uuraalee misoomaa haalaan barbaachisa. Ta’us qindoominaan hojjechuu dhabuurraa kan ka’e isa inni tokko ijaare inni kaan diigaa wayita diigu arguu gocha baratamaa ta’aa dhufeera. Kanaan booda garuu dhaabbatni kamuu hirmaannaa abbootii gaheen ala ijaarsa bu’uuraalee misoomaa akka hindandeenye qajeelfamni ba’eera.
Qindoominaan hojjechuu dhabuun bu'uuraalee misoomaa miidhagoo akkanaa miidha
Torban kana/This_Week 43574
Guyyaa mara/All_Days 1468354